IApartment ekwiDolophu epholileyo (Ukuthatha iSikhululo seenqwelomoya sasimahla)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDino
Indlu eqaqambileyo, efudumeleyo, ecocekileyo, epholileyo kunye nebanzi kumbindi wedolophu yaseSarajevo ngaphakathi komgama wokuhamba kuzo zonke iindawo ezibonwayo zesixeko. Indawo onokuthi ube kuyo ukuba ufuna indawo ezolileyo yokuhlala ngelixa ukwazi ukugcina isandla sakho kwi-pulse ye-Bosnia's metropolis edlamkileyo.
Yindlwane epholileyo yezibini ezikwindawo yokuthandana, i-oasis epholileyo yabahloli basezidolophini kunye neentsapho ezincinci, indawo yokusebenzela ezolileyo yabafundi kunye noosomashishini.
Ingaphezulu nje kwendawo yokulala - inokuba likhaya lakho.
Le ndlu yi-50m2 enkulu, inegumbi lokulala elinebhedi enkulukazi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elinesofa esongwayo, igumbi lokuhlambela elibengezelayo elineshawa kunye nomatshini wokuhlamba, kunye nebalcony yekofu yakho yasekuseni.
Iibhedi zifakelwe oomatrasi abatsha kraca.
Le ndlu ibekwe kumgangatho we-4 kwisakhiwo sokuhlala esisembindini weSarajevo, kufutshane nendawo yokuthenga ye-BBI kunye nehotele yaseMariott. Isixeko esidala i-Baščaršija, iindawo zokutyela zasekhaya, iikhefi, iivenkile ezinkulu, ikhemesti, iitram/ibhasi/izikhululo zeeteksi zonke zikumgama wokuhamba. Iintaba zeOlimpiki iJahorina kunye neBjelašnica ziyi-30-40 imizuzu yokuqhuba.
Indlu ikumgangatho wesine. Isakhiwo asinaso ilifti.
Umbuki zindwendwe ngu- Dino
Ndiza kudibana nawe xa ungena kwaye ndihlale unakho ngalo naluphi na ulwazi olongezelelweyo olunokukunceda ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sarajevo